Ungayiguqula njani ividiyo ibe yi-GIF ngokulula, ukhetho olungcono | Iindaba zeGajethi
Ungayiguqula njani ividiyo ibe yi-GIF
UJose Rubio | | Tutorials
Kuqala yayiyi-Twitter, eyayilandelwa ngu-Facebook, ukuze ekugqibeleni idityaniswe kwiTelegram nakwi-WhatsApp. Inkqubo ye- Ii-GIF zoopopayi ziye zathandwa kutshanje, kwaye sinokuzifumana zombini kwezi zicelo sele zikhankanyiwe kwaye sijonge kwenye indawo kwi-Intanethi.
Khumbula ukuba i-GIF yoopopayi ayikho enye into ngaphandle kwe- isakhelo ngokulandelelana oopopayi, ngamanye amagama, ividiyo emfutshane ngaphandle kwesandi. Kodwa kwenzeka ntoni ukuba ufuna ukwenza eyakho oopopayi be-GIF? Ngokwenyani ayinzima njengokuba isenokuvakala. Unobuganga?
Ukuya kuthi ga kwimibala engama-256 kwaye yahlulwe ngokucacileyo ngokungabinasandi kunye nokudlala okungapheliyo okungapheliyo, lEyona ndlela ilula yokwenza i-animated GIF ivela kwividiyo, kwaye uyiguqulele kuloo fomathi. Ukulungiselela le njongo kukho iindlela ezininzi, nangona siza kuzisekela kwezona zilula.
IGiphy yenye kuphela web apho abasebenzisi banokufaka khona kwaye babelane ngeeGIF zethu iikhathuni ozithandayo. Kodwa, ukongeza, isixhobo sakhe semfihlo kukuba ikuvumela ukuba wenze i-GIF yoopopayi kuyo nayiphi na ividiyo ye-YouTube ngokulula nangokulula.
Sinefayile ye- umcebisi phezulu ephepheni, apho singangena khona imigaqo apho sifuna ukufumana i-GIF ethile, kodwa sinokwenza i-animated GIF kwividiyo yeYouTube. ngeqhosha elithi «Yenza», ebekwe phezulu, ngaphezulu nje kwebar yokukhangela.
Nje ukuba iqhosha elithi «Yenza» licinezelwe, siya kuya ngqo ezantsi kwephepha, kwicandelo "Yongeza nayiphi na i-URL", apho ibhokisi yokubhaliweyo Siza kukopa ikhonkco kwividiyo ye-Youtube ukuba sifuna ukuguqula. Umda kuphela kukuba ividiyo yoqobo ayidluli kwimizuzu eli-15 ubude bexesha. Nje ukuba idilesi ikhutshelwe, uGiphy uya kuyamkela ngqo, kwaye uya kuvula umhleli.
Ngaphakathi komhleli sifumana, ngokulandelelana, a ukujonga kwangaphambili kwe-GIF yethu kwicala lasekhohlo, ngelixa kwicala lasekunene siza kuba nalo izilayida ezimbini, ezinokuthi zilungelelanise zombini ixesha le-GIF yethu, kunye nomzuzu esifuna ukuba uqale ngawo. Nje ukuba zohlengahlengiswe zombini ezi paramitha, siza kucofa kwiqhosha lokuqhubeka, elibekwe kwikona esezantsi ekunene.
Kweli nyathelo lesibini, siya kuba nethuba uhombise i-GIF yethu. Singongeza isicatshulwa, oopopayi, amacebo okucoca ulwelo okanye izitikha ukuze i-GIF yokugqibela ilunge ngakumbi kule nto siyifunayo. Kufuneka nje sikhethe ukhetho esifuna ukulongeza, ngokwahlulahlulwa libe ngamacandelo amathathu: isicatshulwa, izitikha kunye nemizobo.
Nje ukuba yonke into esiyifunayo yongezwe, ucofe iqhosha Qhubeka ngokulayisha » ngasezantsi ngasekunene, siya kufikelela kwisinyathelo sokugqibela. Kuya kufuneka singenise iithegi kuphela, ezizitekisi ezithe zacoca i-injini yeGiphy yokukhangela kwiifayile ze-GIF, kwaye ucofe kwiqhosha. Ngenisa kwiGiphy.
Inkqubo yokulayisha ithatha imizuzwana embalwa, kwaye nje ukuba ilayishwe kwiiseva zabo, I-Giphy isinika ithuba lokuba sabelane nge-GIF eyenziwe ngeendlela ezahlukeneyo. Ngaphandle kwamandla khuphela kwikhompyuter yethu, ikuvumela ukuba uyigcine kwiintandokazi zeakhawunti yethu yeGiphy, ukuba unayo. Ikwasinika ithuba lokuba khuphela ikhonkco layo ngqo okanye ulifake kwiwebhusayithi yakho, ukuze kube njengokuba ubona ngezantsi:
Ubungakanani bayo buya kuncitshiswa, ukusukela ekubeni yi-GIF kwaye ingeyiyo ividiyo epheleleyo, yenziwe ngobukhulu obuthile. Nje ukuba uyile kwaye uyikhuphele, ungabelana ngayo nabani na ofuna ngendlela oyithandayo.
Ewe, njengokuba uyifunda, I-WhatsApp ikwasinika indlela ekhawulezayo nelula yokwenza iGIF ukusuka kwividiyo ukuze sabelane ngayo nabafowunelwa bethu.
Inkqubo inesinyathelo esinye kuphela, nangona kufuneka sazi owona mda uphambili kule nkqubo: ividiyo esifuna ukuyiguqula ibe yi-GIF kuya kufuneka ubuninzi bemizuzwana engama-6. Oku akuthethi ukuba asinakho ukusebenzisa iividiyo ezinde, kodwa kufuneka sizinciphise kule mizuzwana mithandathu.
Kuya kufuneka sikhethe ividiyo esifuna ukuyiguqula, kwaye senze amanyathelo afanayo ngokungathi siza kuyithumela ngqo komnye wabafowunelwa okanye kumaqela ethu. Ukuphela komqolomba kukuba, kumbono wangaphambili, njengoko ubona kumfanekiso ongentla, kuya kufuneka khetha ukhetho lwe-GIF kwisikhethi kwikona ephezulu ngasekunene. Ngale ndlela, unokuthumela ngokulula ividiyo njenge-GIF.
KwiTelegram sinokubakho Guqula nayiphi na ividiyo esifuna ukuyithumela kwi-GIF oopopayi. Nangona umahluko apha yile asinamda kubungakanani bevidiyo, sinokwenza uguquko ngayo nayiphi na ividiyo esiyirekhodileyo okanye esinayo kwisixhobo sethu.
Ngendlela efanayo nakwi-WhatsApp, kufuneka nje Cinezela iqhosha elincinci elifakwe njengesithethi kwikona ephezulu ngasekhohlo komboniso wevidiyo. Ngale ndlela, siya kufumana isaziso sokuba xa siyithumela ngaphandle kwesandi, iya kuphuma njenge-GIF, njengoko ubona kumfanekiso ongentla. Ngaphandle kwamathandabuzo, kunjalo Ezona ndlela zilula zokuguqula ividiyo ibe yi-animated GIF.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Ungayiguqula njani ividiyo ibe yi-GIF
Iindlebe zokugqibela IBHOMU 3, isithethi seendawo zonke kunye nawo wonke umgangatho
Isamsung isungula kwi8K QLED, kunye nodonga kunye netekhnoloji ye-8K HDR